Gabar 11-jir ah oo lagu Kufsaday Degmada Kaaraan - Muqdisho Online
Home News Gabar 11-jir ah oo lagu Kufsaday Degmada Kaaraan
Degmada Karaan ee Gobolka Banaadir waxaa ka dhacay fal kufsi ah oo loo geestay Gabar 11 sano jir ah waxaana kufsiga ka dambeeyay nin da’diisa lagu sheegay 60 jir iyo nin kale oo la socday.
Ehelada Gabadha ayaa ii xaqiijiyay Xili galab ah Gabadha oo Iskuul laga soo daayay in uu bajaaj ku soo qaaday nin deriskooda ah oo ay aad u taqaanay sidoo kale oday ah, waxa uu ka soo qaaday meel u dhaw Hotel Lafwayn kadibna Afka ayuu ka xiray iyo Gacmaha waxa uuna geestay dhulka Kaawada laga qodo ee degmada Kaaraan.
Labadaan raga ah ayaa habeen dhan ku heestay keynta gabadhaan 11 jirka ah waxa ayna u geesteen Tacadiyo aad u xanuun badan. Waalidkeed ayaa ii sheegay in maalintii kale gabadha oo gacmaha iyo lugaha ka xiran lagu arkay duleedka Kaaraan.
Sidoo kale Gabadha ayaa dhuunta laga merjiyay waxaana looga Xiray Xerag si loo dilo balse ma aysan dhicin sidaasi. Raga falkaan ka dambeeyay ayaa markii ay habeen dhan kufsadeen oo ay xir xireen sidoo kalane merjiyeen ayaa ka tagay gabadha iyadoo suuxsan balse mar dambe ayaa dadkii arkay kadibna lagu soo raadiyay waalidkeed.
CID iyo Isbitaalka Madiina ayaa xaqiijiyay Kufsiga iyo jirdil kale ee Gabadha loo geestay. Gabadha ayaa markii ay ogaal yeelatay sheegtay ninka dhibka u geeatay, ninkaan ayaa ka baxsaday Gurigiisa waxaana waalidkiis iyo walaalahiis ay sheegayn in aysan ogayn halka uu jiro waxayna dalbadayn in sharci lagu kala baxo.
Ninka Kufsigaan geestay oo ah 60 jir carruurtiisa ay carruur kale sii dhaleen ayaa sidaan oo kale hore Kufsi u geestay.
Hey’adda dambi baarista Booliiska ee CID waalidiinta waxay ku eedeeyeen in aysan kiiskaan juhdi badan gelin, waxay kaloo ku eedeeyeen in ay hey’adda aad uga gaabisay oo aysan uga jeedin dhaq dhaqaaq iyo garab istaag qoyskaan loo sameynayo.
Previous articlePuntland oo amar Culus soo saartay (Aqriso)
Next articleXuska 59-Guuradii kasoo wareegtay Aas-aaska Ciidamada Cirka oo Muqdisho lagu qabanaayo